Wasiirad Khadiika diiriye oo diidey in ay qaabisho Wafdi ka socdey Wasaarada Cayaarha Jubbaland iyo shaki badan oo soo baxay? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Wasiirad Khadiika diiriye oo diidey in ay qaabisho Wafdi ka socdey Wasaarada Cayaarha Jubbaland iyo shaki badan oo soo baxay?
(13-10-2017) Warar ay heshay Shabekadda qalinkacaayaraha ayaa sheegaya in Wasiirada dhalinyarada iyo Cayaaraha dowlada Feraalka Soomaaliya Khadiija Maxamed diiriye ka cudur daaratay in ay qaabisho Wafdi uu Hogaaminayey Wasiirka Sports ka ku Meel gaarka ah ee Jubbaland C.waaxid Axmed yare.
Wafdiga Wasiirka Jubbaland oo Maalmihii lasoo dhaafay kusugnaa Magaalada Muqdisho ayaa doonayey in ay Wasaarada Sportiga Wasiiradeeda Khadiija diiriye kala hadlaan habkii ay u qabsoomi lahaayeen Cayaaraha ismaamul Goboleedyada dalka oo lagu waday in ay 21 ka bishaan ka furmaan magaalada Kismaanyo ee ah Xarunta Maamulka Jubbaland.
Waxaan Tilifoon kula hadlay Wasiirka Wasaarada Spors ka Jubbaland C.waaxid Axmed yare Waxaana uu ii sheegay in ay haleeli waayeen lakulanka Wasiirada dhalinyarada iyo Cayaaraha Soomaaliya Khadiija Maxamed diiriye loona sheegay xiligii ay balanta lahaayeen in ay Xanuunsantahay isla Markaana marka ay Caafimaado ay Kismaanyo ugu imaan doonto isaga oo ka gaansaday in uu bixiyo wax kale oo faah faahin ah.
Ilo wareegyo diidey in aan Xigano Magacooda ayaa qalinkacayaaraha u sheegay in uu jiro qilaaf ka dhahay siyaasada Maamul Goboleedyada dhawaan ku shiray Kismaanyo iyo dowlada dhexe taasina ay Saameyn ku yeeelatay wada shaqaynta Wasaaradaha Cayaaraha Maamul Goboleedyada iyo tan dowlada federaalka ah iyada oo sidoo kale lasheegayo in uu jiro shaki aad u badan oo ku saabsan in ay qabsoomi doonaan Cayaaraha Maamul Goboleedyada oo lagu wadey in ay furmaan 21 ka bishaan.
Dhanka kale Maamulka Jubbaland ayaa lasheegayaa in aysan diyaarin Garoonkii lagu Cayaari lahaa koobka ismaamul Goboleedyada dalka iyada oo uu weli ku socdo dhisme waxaana macquul ah in dib loo dhigo xiligii horay loo shaaciyey in Cayaaruhu bilaaban doonaan.